My Browser၊ မတူညီသောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာ၊ Androidsis
အင်တာနက်ကိုသုံးရန်နှင့်အခြားအရာမျှသာအသုံးပြုရန်အတွက် Android Web browser ကိုသင်ငြီးငွေ့နေပြီလား။ အကယ်၍ ဤမေးခွန်း၏အဖြေသည်များသောအားဖြင့်ဟုတ်သည်ဆိုလျှင်၊ ဤဆောင်းပါးတွင်သင့်အားကျွန်ုပ်တင်ဆက်ပေးသောဗွီဒီယို post ကိုမလွတ်သွားစေရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုပါသည်။
ဒါ့အပြင် Xiaomi ရဲ့လက်ထဲကနောက်ဆုံးပေါ်အံ့သြစရာတစ်ခုကိုသင့်ကိုငါပြမယ်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ဟုတ်ကဲ့၊ ထိုအရာကိုတီထွင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည့် Xiaomi ၏လက်မှသင်ကြားသည် ကျွန်တော်တို့ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပေးထားတဲ့အလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ Web browser။ သူတို့ကိုငါအောက်မှာအသေးစိတ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။
ပထမ ဦး စွာပြောရမှာက Xiaomi မှတီထွင်ထားသော Android အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသော Web browser သည်တရုတ်မူရင်းအမှတ်တံဆိပ်၏ terminal တွင်ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ယခုကျွန်ုပ်တို့လုပ်နိုင်မည့် application တစ်ခုဖြစ်သည်။ Google Play စတိုးမှအခမဲ့ရယူပါ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏ဆိပ်ကမ်းများရှိရန်မလိုပါ။
Google Play မှမဟုတ်သည့် Android အတွက်တရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းစတိုးမှဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်တိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကိုဤတွင်ကြည့်ပါ။
1 Mi Browser ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ download ရယူပါ
2 သို့သော် Xiaomi Mi Browser နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
Mi Browser ကို Google Play စတိုးမှအခမဲ့ download ရယူပါ
ကျွန်ုပ်၏ Browser - မြန်ဆန်။ လုံခြုံစိတ်ချရသော
ရေးသားသူ: Zhigu ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်
အကယ်၍ ဘဝ၏တူညီသောတိုက်ဆိုင်မှုများအနက်တစ်ခုသည်ပထ ၀ ီနယ်မြေကန့်သတ်ချက်များ၊ စက်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သိသောအကြောင်းများကြောင့်လျှောက်လွှာကို Play Store တွင်မပေါ်ပါကသင်အနေဖြင့်လည်းလုပ်နိုင်သောကြောင့် APKmirror မှ download လုပ်ပါ ဒီ link ကိုနှိပ်ပါ.
သို့သော် Xiaomi Mi Browser နှင့်မည်သို့ကွာခြားသနည်း။
Web browser တစ်ခုအနေဖြင့်၎င်းသည်အလွန်ထူးခြားသောဒီဇိုင်းသို့မဟုတ်စတိုင်လ်မရှိပါ ထို့အပြင် Play Store Xiaomi တွင် Mint Browser ၏အမည်နှင့်တူညီသောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာရှိပြီးဖြစ်သည်။
Mint Browser - အစာရှောင်ခြင်း အလင်း သေချာတာပေါ့။
ပါဝင်သည် ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာ blocker နှင့် pop-ups အဖြစ်ရှုထောင့်၌တည်၏ ဒီ app ကိုပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းလိုက်တာနဲ့၊ ဒီ browser ကိုပြောရမယ်၊ ကြောင်းရှုထောင့်၌ကအများကြီးတပ်မက်လိုချင်သောအခံရဖို့အများကြီးထွက်ခွာမည် ထိုသို့ဝေးဥပမာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖြစ်ပါတယ် မည်သည့် Android တွင်မဆိုအချိန်အတန်ကြာတပ်ဆင်နိုင်သော Samsung Web browser ဒါက Samsung အမှတ်တံဆိပ်မှမဟုတ်ရင်တောင်။
ငါသည်ဤစာမူ၏အစတွင်သင့်အားထားခဲ့သည့်ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ရှုရန်မရပ်တန့်ပါကသင်မိနစ်အနည်းငယ်အချိန်ယူရန်သင့်အားအကြံပေးလိုသည်မှာသင့်အတွက်ငါယူဆောင်လာလိုသောကောင်းကျိုးများနှင့်ထူးခြားချက်များအားလုံးကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Androids အတွက်အလွန်ကွဲပြားသော web browser ကိုအကြံပြုပါ.
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် "တစ်ခုတည်းရှိ" ဟူသောအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူအကျဉ်းချုပ်နိုင်သည့်အချို့သောထူးခြားချက်များနှင့်စွမ်းအားကိုခွင့်ပြုခြင်းအပြင် ဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာတွင်ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်မူရင်း Facebook အက်ပလီကေးရှင်းကိုဖယ်ရှားပါသင်၏စမတ်ဖုန်းသည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ကျေးဇူးတင်မည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်၊ ၎င်းမှာပါဝါလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလည်းရှိသည် ဒီရေပန်းစားသောလူမှုကွန်ယက်တွင်မျှဝေထားသောမည်သည့်ဓာတ်ပုံနှင့်ဗွီဒီယိုကိုမဆိုကူးယူပါ
အကယ်၍ ဤအရာသည်သင်အနည်းငယ်သာထင်ရလျှင်သန်းနှင့်ချီသောအရေအတွက်ကိုအသုံးပြုသောသုံးစွဲသူများ၊ WhatsApp အသုံးပြုသူများသည်သူတို့လိုချင်သမျှကာလပတ်လုံးဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်။ \_ t WhatsApp status ပေါ်တွင်မျှဝေသောမည်သည့်အကြောင်းအရာကို download လုပ်ပါ။ ဤအရာအလုံးစုံကို Mi Browser ကို web browser မှကိုယ်တိုင်။
အခြားအရာများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြားလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမှာ Facebook application ရှိသည့်အပြင်ဓာတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကူးယူခြင်း (သို့) WhatsApp ၏အခြေအနေကိုမြှင့်တင်ခြင်း၊ ၎င်းတွင်စံအဖြစ် built-in file manager ရှိသည်.
ဒါကြောင့်ကျနော်တို့နိုင်ပါလိမ့်မည် ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုယ်တိုင်မှကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများ၊ ဗွီဒီယိုများ၊ တေးဂီတနှင့်ဒေါင်းလုပ်များကိုကြည့်ရှုစီမံခြင်း အခြားမည်သည့်ဖြည့်စွက်လျှောက်လွှာများအတွက်လိုအပ်ချက်မရှိဘဲ။ ဤသည်သည်အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသောဆိပ်ကမ်းများအတွက်သင့်တော်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အရေးမကြီးသော်လည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအနေဖြင့်အမူအယာများကိုရှေ့သို့ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ Android ၏ညာဘက်နှင့်ဘယ်ဘက်မှရိုးရှင်းသောအမူအရာဖြင့် tabs များအကြားပြောင်းလဲရန်ရွေးချယ်ခြင်း.
ဒီဆောင်းပါးနဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာမင်းရှင်းပြခဲ့တဲ့အရာအားလုံးအတွက်ငါထင်တယ် ၎င်းသည်သုံးစွဲသူများအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသော application တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်အထူးသဖြင့်၎င်းတို့၏ Android ကို Facebook ကဲ့သို့သောအက်ပလီကေးရှင်းများနှင့် Facebook သို့မဟုတ် WhatsApp Status မှအကြောင်းအရာများကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်လိုသူများအတွက်ဖြစ်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Xiaomi Mi Browser, သင်ကြိုက်နှစ်သက်မည့်လုပ်ငန်းဆောင်တာများပါသောဝက်ဘ်ဘရောက်ဇာကို download လုပ်ပါ